Prasta Khabar-२०२६ को विश्वकप फुटबल कहाँ ?
२०२६ को विश्वकप फुटबल कहाँ ?
३० जेठ, हेटौँडा । सन् २०२६ को विश्वकप फुटबलको आयोजना उत्तर अमेरिकी देशहरु अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाले संयुक्त रुपमा गर्ने भएका छन् ।
रुसमा सम्पन्न ६८ औं फिफा कंग्रेसले उत्तर अमेरिकी तीन देशलाई विश्वकप आयोजनाको अधिकार प्रदान गरेको छ । अब सन् २०२६ को विश्वकप अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने छन् ।
सन २०२६ को विश्वकपको आयोजनाका लागी मोरक्कोले पनि दावेदावरी प्रस्तुत गरेको थियो ।
दावेदारीका क्रममा भएको निर्वाचनमा २१० फिफा सदस्य राष्ट्रमध्ये २०३ मुलुक मतदानमा सहभागीता जनाएका थिए । तीन मत बदर भएपछि २०० मतमध्ये अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले १३४ मत पाए भने मोरक्कोले ६५ मत पायो । एक मत तटस्थ थियो ।
मोरक्को विश्वकप आयोजनाकालागी पाँच पटक दावेदारी दिए पनि विश्वकप आयोजना गर्ने अवसरबाट चुकेको छ ।
यसअघि अमेरीकाले १९९४ को विश्वकप आयोजना गरेको थियो भने मेक्सिकोले १९७० र १९८६ को विश्वकप सफल रुपमा गरेको थियो ।
उत्तरी अमेरीकी देशहरुले विश्वकपका पूर्वाधार निर्माणका लागि १६ बिलियन अमेरीकी डलर खर्च गर्ने जनाएका छन् ।
जसमा उनीहरुले २३ मध्ये मुख्य १६ वटा स्टेडियममा विश्वकप खेलाउने बताएको छन । सन् २०२६ को विश्वकपमा कुल ४८ देशको सहभागिता रहनेछ ।